WordPress 2.1 iri pano ... Hmmmm | Martech Zone
WordPress 2.1 iri pano… Hmmmm
Chipiri, January 23, 2007 Chipiri, January 23, 2007 Douglas Karr
Dare redzimhosva ratobuda… ndiri kuzomirira vamwe kuti vapinde muShokoPress 2.1 asi heino pfupiso yangu:
Vanofara kuti vakanzazve mamwe emenu sarudzo - blogroll inonzwisisika kupfuura zvinongedzo uye makomendi ari nani pane hurukuro.
Ndiri paOSX uye ndakaedza matatu mabhurawuza, Safari, Camino uye Firefox 3 uye hapana chinonditendera kuti nditarise mifananidzo yandakaburitsa. ZVIMWE ZVAKAITIKA: Zvakaedza zvakare Internet Explorer 2 paWindows XP uye yaive nenyaya imwechete.
Ummmm… ita shuwa kuti unokanganisa ma plugins ako usati wamutsiridza. Ooops ... saiti yangu yanga yakanaka kupenda ipapo kweawa kana senge pandakaita kuvaka zvakare.
Ini ndakanga ndisina imwechete plugin yakatyoka… asi ini ndakamutsa mhepo kumutsiridza yega yega yega kuita kuti saiti idzore.
Admin inoita kunge idofo ... ingangova ini. Ini ndinofarira iyo autosave basa !!!
Kana ini ndikabaya Manage maDownloads… blank screen zvakare.
Imi varume munofungei? Kusakwanisa kutarisa uye kuisa mifananidzo kuri kuzondiuraya. (Ndiri kukwanisa kuzviisa pasina dambudziko). Ini handisi kuvandudza chero vatengi kusvikira ndanzwa zvimwe.
Firefox Kubira: Tsvaga Yangu Blog uchishandisa Keymark
Ndiri kumira pakusimudzira kwechinguvana kusvika ndanzwa zvimwe. Ndakatoverenga akati wandei ekusimudzira nyaya dzinotyisa nezve akawanda plugins asiri kushanda zvakare.
Ini handichatokwanisa kupinda kuAdmin izvozvi. Ini ndichafanirwa kuita imwe plugin yekudzima kuti ndione kana izvo zvinobatsira.
Jan 25, 2007 na3:21 PM
Ingori yekuvandudza… zvinoita sekunge pane mamwe mabasa echinyakare mudingindira rangu asina kutora zvakanyanya kugadziriso yedatabase.